Luis Esteban ›Blog yaJuan Herranz
Bhuku raLuis Esteban
Mabhuku matatu akanakisa naLuis Esteban
Vanoti mhanza inotsvakwa. Kana iwo magadzirirwo erombo achishanda seizvi, Luis Esteban mutsigiri mukuru weiyo mime. Nekuti pasina kupokana iwe unofanirwa kuziva mashandiro ebasa (mune iyi nyaya semunyori) asi iwe zvakare unofanirwa kuwana kuti uwane mukana wekushamisa iyo ...
Moroloco, naLuis Esteban
Mune chimwe chirevo chaMoroloco tinowana mazita akakwana echimiro chenyukireya chenyaya iyi. Mutungamiri wepasi pevhu muCampo de Gibraltar uko imwe yemisika mikuru yevatema yehash munyika inowanda. Uye iye munyori wenyaya ino, a Luis, anoziva nezvazvo zvakanaka ...
Rwizi rwakanga rwakanyarara, naLuis Esteban
Kana panguva iyo pandakaverenga bhuku The Evha reZvose Zvese, rakanyorwa naVíctor del Arbol, ndakafunga mupiro wekusavimbika wemunyorwa unoitwa nehunyanzvi hwakaita semapurisa. Shanda mumugwagwa, mukutsvaga kwakanangana nezviitiko uko kwakanyanya kushatisa kwedu ...